Uummatni Oromoo, hanga yoomiitti gadadoo keessa jiraata? | Oromia Shall be Free
bilisummaa July 24, 2015	Comments Off on Uummatni Oromoo, hanga yoomiitti gadadoo keessa jiraata?
Yeroo Oromoon walbira dhaabbatee tokkummaadhaan diinaan falmu amma ta’uu baatnan, bilisummaan nu barbaadnu fi Oromiyaan nuti ijjaarrachuuf hawwinus abdjuu ta’anii hafuu akka danda’an shakkiin hin jiru. Kun sodaa fi abdii kutachuus miti; balaa namatti deemaa jiru alaalatti arguu danda’uu dha. Kan amma nu nyaachaa jiran Wayyaanotni nama-nyaaatan otuu jiranuu; warri sirna durii sana nutti deebisuuf hawwii fi abjuu qabanuu kutatanii loluuf qophaayaa yeroo jiran kana Oromoon callisee taa’uun; fedhii sabaa dhiisee kan dhuunfaatiif dursa kennuun badiitti nu geessa jedheen amana. Hamma balaan deemaa jiru tokko nama bira gahee harkaan nama qabatutti ykn nama hudhutti callisanii ilaaluun badiif of qopheessuu dha. Shira diinni nurratti dalagaa jiru dura dhaabbachuuf; qabsoo keenyas cimsinee uummata keenya gadadoo fi qaanii keessaa baasuuf qabxiilee armaan gadii akka dhaamsa Oromummaatti dhiyeessuun fedha:
Previous Genzebee Dibaabaa ta dhiyoo Monaakootti moote Waliin barana 6 dorgomtee cufaa moote, dorgommii lama rekordii haraa argatte
Next Appeal letter to president Obama